လိင်တူချစ်ခြင်းအား မုန်းတီးရွံရှာခြင်း၏ အကျိုးဆက်များကို စနစ်တကျ ဆန်းစစ်သက်သေပြခြင်း | Colors Rainbow
July 16, 2018 Admin Admin 3955 Views0Comments min read
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်း လိင်စိတ်ခံယူမှု ကွဲပြားသူများအပေါ် ခွဲခြားဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေများ ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းတွင် တစ်နေ့တစ်ခြား မြင့်တက်လာခဲ့မှုများက သတင်းမီဒီယာများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ပိုမိုရရှိလာစေခဲ့သည်။ သတင်းမီဒီယာများ အနေဖြင့်လည်း အဆိုပါခွဲခြားဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေများကြောင့် LGBT များအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်လာနိုင်မည့် မလိုလားအပ်သော ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များနှင့် လိင်တူချစ်သူများအပေါ် မုန်းတီးမှုကို အခြေခံသည့် အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားလာနိုင်မှုများကို မီးမောင်းထိုး ရေးသားတင်ပြခဲ့ကြသည်။
သတင်းမီဒီယာများ ရေးသားတင်ပြခဲ့သကဲ့သို့ပင် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းရှိ လိင်တူချစ်သူအုပ်စု (LGBT) များအပေါ် ပစ်မှတ်ထား ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်မှုများ၊ အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုများ၊ ဖမ်းဆီး ညှင်းပမ်းမှုများမှာ အဆိုပါ LGBT များအပေါ် ခွဲခြားဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေများ၏ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းနေပေသည်။
သတင်းမီဒီယာများ၏ ရေးသားတင်ဆက်မှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးစား အားထုတ်မှုများကြောင့် အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်များအပေါ် လူအများ၏ အာရုံစိုက်မှုပိုမိုရရှိလာစေခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်များအထိ ရောက်ရှိကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။ LGBT များအပေါ် ခွဲခြားဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းလာသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မရှင်နာများ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ခေါင်းဆောင်များ၏ စိုးရိမ်တကြီး ပြောဆိုမှုများက ယင်းအဆိုအပေါ် သက်သေခံနေသည်။
သို့သော် လိင်တူချစ်သူအုပ်စု (LGBT) များအား ခွဲခြားဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေများအပေါ် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ၏ စိုးရိမ်မကင်း ကန့်ကွက်ရှုတ်ချမှုများ တိုးမြှင့်ပြုလုပ်လာသည့်နည်းတူ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း လူ့အခွင့်အရေးဘောင်၏ ပြင်ပနယ်ပယ် သို့မဟုတ် ကိုယ့်ကျင့်သီလနယ်ပယ် စသည်များမှ ရပ်ခံပြောဆိုမှုများလည်း ထင်ထင်ရှားရှား ရှိနေပေသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထင်ရှားသည့်အချက်မှာ လိင်တူချစ်သူများအပေါ် ခွဲခြားဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေများအား ပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးလာသည့် နိုင်ငံများကို အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံများနှင့် ကုလသမဂ္ဂက ဖိအားပေး ပြောဆိုသည့်အခါ အထူးသဖြင့် အာဖရိကတိုက်မှ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များက ၎င်းတို့ နိုင်ငံများ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်စိုးမှုနှင့် အာဖရိက ယဉ်ကျေးမှုစံတန်ဖိုးများအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးရှုထောင့်မှ အကြောက်အကန် ငြင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ လိင်တူချစ်သူ အုပ်စု (LGBT) များအပေါ် ခွဲခြားဖိနှိပ်ခြင်းမှာ နိုင်ငံတော်၏ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်သုဉ်းခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပြီး အကျိုးအပြစ်အား နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့နိုင်ငံနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏အကျိုးကို ပိုမိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည့်အတွက် လုပ်သင့်သည့်ကိစ္စတစ်ရပ်အဖြစ် တုံ့ပြန်ပြောဆိုလေ့ ရှိကြသည်။
ထို့ကြောင့် လိင်တူချစ်ခြင်းအပေါ် အကြောင်းမဲ့ တရားလွတ်မုန်းတီးခြင်းနှင့် ဖိနှိပ်ခြင်းများမှာ နိုင်ငံနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် မည်မျှအထိ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေနိုင်သည်ကို ပိုမိုထင်ရှားသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် တိုင်းတာဖော်ပြရန် မလွဲမသွေ လိုအပ်လာပေသည်။
ထိုသို့ တိုင်းတာဖော်ပြရန် လိုအပ်လာသည်နှင့်အမျှ ပညာရှင်အသီးသီး၊ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအနေဖြင့် လိင်တူချစ်သူအုပ်စု (LGBT) များအပေါ် ဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေများ၊ နှုန်းစံများ၊ မူဝါဒနည်းလမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းလမ်းအသစ် ချဉ်းကပ်မှုအသစ်များ အသုံးပြုကာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများကို ပြုလုပ်လာကြသည်။ ထိုသို့လေ့လာရာတွင် ၎င်းတို့အနေဖြင့် LGBT များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ စနစ်တကျအားဖြင့်လည်းကောင်း အပေါ်ယံအားဖြင့် တော်ရုံတန်ရုံ မသိနိုင်သော အလွန်သိမ်မွေ့စွာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်စေသည့် အယူအဆအမြင်အစွဲများ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှုန်းစံ တန်ဖိုးများအထိ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လေ့လာခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့လေ့လာမှုများမှတဆင့် လိင်တူချင်းချစ်ခြင်းအပေါ် အကြောင်းမဲ့ ရွံရှာမုန်းတီးခြင်းမှာ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်စိုးမှုနှင့် ဘာသာရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စသက်သက်မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိုပါ များစွာထိခိုက်စေနိုင်သော ကိစ္စရပ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း သိရှိလာခဲ့ကြသည်။
သို့သော် အဆိုပါ စီးပွားရေးအရ ထိခိုက်စေနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့မည်ပုံ ဖြစ်စေနိုင်သည်ကို သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များအနေဖြင့် ရှင်းလင်းစွာ အဖြေပေးနိုင်ရန် လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် အချက်အလက် ကိန်းဂဏန်းများဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေးပညာရှင်များအနေဖြင့် စုဝေးပြီး လိင်တူချင်းချစ်ခြင်းအပေါ် အကြောင်းမဲ့ ရွံရှာမုန်းတီးခြင်းက စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် မည်ကဲ့သို့ ချိနဲ့အောင် လုပ်ရာရောက်နေကြောင်းကို သက်သေပြနိုင်မည့် ခိုင်မာသည့် အချက်အလက်များအား ဖော်ထုတ်တင်ပြနိုင်ဖို့အရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထိုကွက်လပ်ကို စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပရော်ဖက်ဆာတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီး LGBT အရေး ထင်ရှားသော တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သူ M.V. Lee Badgett က ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ လိင်တူချစ်သူတွေအပေါ် ရွံရှာမုန်းတီးမှုက စီးပွားရေးအပေါ် မည်မျှအတိုင်းအတာထိ ရိုက်ခတ်စေနိုင်ပုံကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ကမ္ဘာဘဏ်ကနေ ကမကထ ပြုလုပ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် သူမအနေဖြင့် အချက်အလက် အခိုင်အမာဖြင့် စတင်တင်ပြခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် လိင်တူချစ်ခြင်းအပေါ် အကြောင်းမဲ့ ရွံရှာမုန်းတီးသောကြောင့် အကြောင်းမဲ့ ခွဲခြားဖိနှိပ်ရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေများ၊ အိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တည်ရှိနေသည့် လိင်တူချစ်သူများအပေါ် ခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံသည့် ဓလေ့များ၊ အယူအဆအစွဲများ၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်မှ ကျဉ်ဖယ်မှုများ၊ အတင်းအကြပ် အိမ်ထောင်ချပေးခြင်းများ၊ ကျောင်း စာသင်ခန်းနှင့် အလုပ်အကိုင်စသည့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် လိင်တူချစ်သူများ အပေါ် ခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုများကြောင့် စီးပွားရေးအရ မည်ကဲ့သို့ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသည်များကို သူမက လေ့လာသုံးသပ်၍ တင်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမ၏ လေ့လာတွေရှိချက်အရ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် လိင်တူချင်း ချစ်ခြင်းအပေါ် အကြောင်းမဲ့ ရွံရှာမှုများ တည်ရှိနေခြင်းကြောင့် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀ ဒသမ ၈ ဘီလျံအထိ ထိခိုက်နစ်နာ နေစေခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ ငွေကြေးပမာဏမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပြည်တွင်း အသားတင်ထုတ်လုပ်မှု၏ ၁ ဒသမ ခုနှစ် ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပြီး M.V. Lee Badgett အဆိုအရ အဆိုပါ ပမာဏမှာလည်း အပေါ်ယံ (Iceberg) မျှသာ ဖြစ်သေးကြောင်း သိရပေသည်။
သို့ရာတွင် အဆိုပါ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုလုပ်ရာတွင် အကန့်အသတ်များ များစွာ တည်ရှိနေပေသေးသည်။ လိင်တူချင်းချစ်ခြင်းအပေါ် ရွံရှာမုန်းတီးမှုဓလေ့များ၊ ပေါ်လစီများ၊ ဥပဒေများ တည်ရှိနေခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအား မခြွင်းမချန် မည်ကဲ့သို့ ရိုက်ခတ်မှု ရှိနိုင်စေသည်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွယ်တကူ စံနမူနာပြအားဖြင့် ဖော်ပြရန် မလွယ်ကူသည့်နည်းတူ သုတေသနပြုလုပ်ရာတွင် အချက်အလက်များကို လေ့လာနိုင်ခွင့် လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်းကလည်း လေ့လာမှုအား အကန့်အသတ် ဖြစ်နေစေကြောင်း M.V. Lee Badgett က ပြောဆိုခဲ့သည်။
အလားတူပင် လိင်တူချစ်သူများအပေါ် ခွဲခြားဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေများကို ရုပ်သိမ်းပယ်ဖျက်ခြင်းက တိုင်းပြည်၏ စီးပွားတိုးတက်မှုကို ဖြစ်ထွန်းစေသည်သာမက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာရှုထောင့်အားဖြင့်လည်း အဓိက သော့ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းကို အထောက်အထားပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေသေးသည်။
ထို့အတွက် ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုကို ဖြစ်စေသည့် အယူအဆအစွဲအလမ်းများနှင့် သေဆုံးခြင်းအကြား ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနပြုလုပ်သူများမှ လေ့လာမှုတစ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ သုတေသနပညာရှင်များ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ လိင်တူချစ်သူများအပေါ် ခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှု ပြင်းထန်သည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ကျင်လည်နေကြရသော LGBT များမှာ ခွဲခြားဖိနှိပ်မှု အနည်းဆုံးတွင်ရှိသည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ကျင်လည်ရသော ဘဝတူ LGBT များထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် သက်တမ်း (၁၂) နှစ် အသက်ပိုတိုရကြောင်း တင်ပြနိုင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ လေ့လာမှုအနေဖြင့် ပြီးပြည်စုံသော အခြေအနေတစ်ရပ်အထိ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုကို ဖြစ်စေသည့် အယူအဆ အစွဲအလမ်းများနှင့် သေဆုံးခြင်းအကြား ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ methodology အသစ်တစ်ရပ်ကိုမူ အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် ချမှတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ လက်တွေ့အားဖြင့်လည်း ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းရှိ LGBT အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်မှုများ၊ အခြားသူများအား သတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားမှုများ၊ လိင်နှင့်ဆိုင်သော ကူးစက်ရောဂါများ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ပိုမိုတိုးမြှင့်ဖြစ်ပွား ပေါ်ပေါက်လာခြင်းများက အဆိုပါ လေ့လာမှုအား မှန်ကန်ကြောင်း အထောက်အပံ့ပြုနေပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ခဲ့သော လိင်တူချစ်သူများအပေါ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖိနှိပ်အရေးယူနိုင်သည့် ပုဒ်မ ၃၇၇ နှင့် ၃၀ (ဃ) ကဲ့သို့သော ဥပဒေများ၏ LGBT များအပေါ် အပျက်သဘောဆောင်စွာ လွှမ်းမိုးသက်ရောက်မှုများအား လေ့လာထားသော အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်ကို ကာလာရိမ်းဘိုးအဖွဲ့အစည်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သေးသည်။ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင်လည်း မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း နယ်ပယ်တွင် အမြစ်တွယ်နေသော ကျားဖြစ်မှု၊ မဖြစ်မှုအပေါ် အခြေခံသည့် ခွဲခြားမှုအစွဲနှင့် လိင်တူချစ်သူများအပေါ် ခွဲခြားမှုကို ဖြစ်နေစေသည့် အယူအဆ အစွဲအလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးစသော နယ်ပယ်အသီးသီးတို့တွင် LGBT များ အပေါ် မည်မျှအထိ ရိုက်ခတ်မှုများ ဖြစ်နေစေသည်များကို ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်းအားဖြင့် သုတေသနပြု တင်ပြနိုင်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ LGBT များအနေဖြင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် စွဲကပ်အမြစ်တွယ်နေသည့် လိင်တူချစ်သူများအပေါ် ခွဲခြားမှုများကို ဖြစ်စေသည့် အမြင်အစွဲများကြောင့် လူမှုနယ်ပယ်ကဏ္ဍ အသီးသီးတွင် ဖယ်ကျဉ်ခံကြရပြီး နောက်ဆုံးတွင် မဖြစ်သင့်သည့် ဘဝများသို့ တွန်းပို့ခံကြရကာ အချိန်မတန်ဘဲ ကြွေလွင့်နေကြရသည်။
လိင်တူချစ်သူအုပ်စု (LGBT) များအပေါ် မျှတသော လူမူဘဝရရှိခံစားခွင့်ပေးဖို့ မည်မျှပင် တိုက်တွန်း တောင်းဆိုနေစေကာမူ လိင်တူချင်း ချစ်ခြင်းကို အကြောင်းမဲ့ ရွံရှာမုန်းတီးနေသော နိုင်ငံများအနေဖြင့်မူ ယဉ်ကျေးမှု စံတန်ဖိုးများ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အယူအဆရှုထောင့်များမှ အဆိုပါ တောင်းဆိုမှုများကို ငြင်းပယ်နေဆဲသာ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အထက်ပါကဲ့သို့သော နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးအရ နစ်နာနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်စသည်များမှ စနစ်တကျ ပြုလုပ်ထားသော လေ့လာသုတေသနပြု တွေ့ရှိချက်များ၊ အစီရင်ခံစာများက လိင်တူချစ်သူအုပ်စုများအပေါ် အများပြည်သူများအနေဖြင့် ပိုမိုစာနာနားလည်လာနိုင်စေရန် များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၎င်းအပြင် အဆိုပါ စနစ်တကျ လေ့လာသုတေသနပြုလုပ်ထားသော အချက်အလက်များဖြင့်သာ LGBT များအပေါ် မုန်းတီးဖိနှိပ်သည့် ဥပဒေများ၊ ပေါ်လစီများက LGBT အပါအဝင် လူမူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးအပေါ် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးသာ ပိုမိုဖြစ်စေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ စီးပွားရေးပညာရှင်များ၊ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များကို ပိုမိုဆွဲဆောင် သိရှိနားလည်နိုင်စေမည် ဖြစ်သည်။
Advocate ဝဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် Quantifying the Effects of Homophobia ဆောင်းပါးကို ဆီလျော်အောင် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
← အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းတစ်ရပ်ကို Colors Rainbow အဖွဲ့က မော်လမြိုင်မြို့မှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်
(၇၁)နှစ်ပြည့် အာဇာနည်နေ့မှာ Colors Rainbow အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီး LGBT တွေက ဝန်ကြီးများရုံးကို လာရောက်ကြတဲ့ မိဘပြည်သူတွေကို မုန့်နဲ့အအေး ဒါနပြု →